Allahayow riyada soomaalida rumee
waxaa umada soomaaliyeed kuhabon in mar kasta oo layidhaahdo shir baa laqabanayaa in ay ilaahey baraan oo aano nidhaahni liaahayow mid kheyr qaba kadhig oo umada soomaaliyeed ee dacdarada iyo burburko kuhabsadey samata bixiya.Kaasoo umada somaaliyeed cudurka faafey ee qabilka ah ka bogsiiya. waxaana aniga shakhsi ahaan ila quman in hada umado aaney kujirin xile dawlad lago wada qanacsanyahey suurta gasho, ee xal laraadiyo kadibna marii dawlad caadil ah lahilo xaqiina qof kasta waxa uu mudanyahey sidii kuhile lahaa laraadiyo.
waxaan si gaar ahaaned umada soomaaliyeed ee walaalahey ah kula talinayaa, in waxaa naburburiyey ee qabiilka iyo xil iyo jaga jaceylka ah laga tanaasulo oo maslaxa khaas ah oo lago midoobaayo laraadiyo.dhamaan raga xilka sooomaaliya ama kooxaha siyaasada isku haya waa in ay badbadada dadka iyo dalkii ay burburiyiin, e aaney wali umada xumaan iyo isnaeyb uhorsedin.
ugodanbaystii waxaan usoo jiidinayaa dhalita soomaaliyeed hadii raga danahooda iyo tan qosaakoda ay san shirkaan xil kugaadhin ay arinto utaalo dhalinta soomaaliyeed oo ay kudaadaalaan sidii ay kubaadbaadin lahaayeen aayaha umada iyo kooda.
Waa walaalkiin: Ibraahim Mhamud
oo ah ardey soomaaliyeed oo dalka uganda jaamacad kadhigta.